New Home Realty: Real Estate Agency & Project sales company in Yangon
Real Estate Agency in Yangon, Myanmar
အမျိုးအစားများ လုံးချင်း တိုက်ခန်း ကွန်ဒို မြေကွက် စျေးနှုန်းများ သိန်း ၂၀၀၀-၅၀၀၀ သိန်း ၁၀၀၀ သိန်း ၄၀၀ သိန်း ၃၀၀ သိန်း ၅၀၀ သိန်း ၇၀၀ သိန်း ၆၀၀ သိန်း ၉၀၀ သိန်း ၈၀၀ သိန်း ၂၀၀ သိန်း ၅၀၀၀-၆၀၀၀ သိန်း ၆၀၀၀-၇၀၀၀ သိန်း ၇၀၀၀-၈၀၀၀ သိန်း ၁၀၀ မြို့နယ်များ မြောက်ဒဂုံ တောင်ဥက္ကလာ သင်္ဃန်းကျွန်း ‌ဒေါပုံ တာမွေ သာကေတ ရန်ကင်း လှိုင် ဗဟန်း မြောက်ဥက္ကလာ မရမ်းကုန်း အရှေ့ဒဂုံ တောင်ဒဂုံ လမ်းမတော် ဗိုလ်တထောင် လှိုင်သာယာ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အင်းစိန်
DISCOVER YOUR DREAM HOMES
၆လွှာ-သိန်း ၆၂၀၉ရပ်ကွက်တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။View Listing
၇လွှာ(A)-သိန်း ၁၅၀၀(1400sqft) ၇လွှာ(B)-သိန်း ၁၅၀၀(1400sqft) ၇လွှာ(C)-သိန်း ၁၅၀၀(1400sqft) ၇လွှာ(D)-သိန်း ၁၅၀၀(1400sqft) Penthouse(A)- သိန်း ၁၈၀၀(2800sqft) Penthouse(B)-သိန်း ၁၈၀၀(2800sqft) ၆လွှာ(D)-သိန်း ၁၅၀၀(1400sqft)သင်္ဃန်းကျွန်းသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။View Listing
သိန်း ၅၂၀၀ (ညှိနှိုင်း)၃၆ ရပ်ကွက်မြောက်ဒဂုံ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးView Listing
သိန်း ၅၅၀၀ (ညှိနှိုင်း)၃၀ ရပ်ကွက်မြောက်ဒဂုံ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးView Listing
Starting from 120,000 $USDရန်ကင်းမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးView Listing
Penthouse- သိန်း၁၂၀၀၁၆၅လမ်းတာမွေမြို့နယ်။, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။View Listing
မြေညီ -သိန်း ၂၈၀၀ ၂လွှာ -သိန်း ၁၈၀၀ ၇လွှာ-သိန်း ၁၇၀၀ ၈လွှာ-သိန်း ၁၇၀၀၁၄ ရပ်ကွက်ရန်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။View Listing
သိန်း ၅၂၀၀ (ညှိနှိုင်း)28 ရပ်ကွက်မြောက်ဒဂုံ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးView Listing
ပထမထပ် -၁၅၉၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း) တတိယထပ် -၁၅၉၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း)ပိုက်လုံးလမ်းဗဟန်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးView Listing
၄၂၀၀ သိန်း၄၄ ရပ်ကွက်မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးView Listing
၄၅၀၀ သိန်း၃၅ရပ်ကွက်မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးView Listing
၇လွှာ-၂၆၅၀သိန်း၊ ၈လွှာ-၂၈၅၀သိန်း(၁၆)ရပ်ကွက်ရန်ကင်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးView Listing
Your Home Loan Agent in Yangon Contact us
Why Choose New Home Realty?
New Home Realty is one of the main core Property Management brand of New Home International Co.,Ltd. The organization was formally established in 2020 at Yangon. The founding members have been active in the real estate industry since 2013 who are expertise in Regional, Local project sales & marketing. We have committed to deliver high quality one-stop services in the emerging property market of Myanmar.